YENZA I-NIGHTSTANDS YAKHO NGEENGCINGA ZE-DIY - IIPROJEKTHI ZASEKHAYA
Indawo yokulala engcono: I-9 Idea-Sparking Nightstand Makeovers
Nokuba uzingela iseti entsha yeendawo zokuma ebusuku okanye ugula ngokujonga ezo onazo ngoku, ezi makeovers ezilishumi zobusuku zibubungqina bokuba zininzi izimvo onokuzama ukuziphucula inkangeleko yetafile yakho esecaleni kwebhedi.
(Ityala lemifanekiso: UMichelle Turchini )
1. Yipeyinte mhlophe
UMichelle uthathe iipleyiti ezinobunzima, eziphelelwe lixesha kwaye wakhanyisa kwaye wakhanyiswa ngengubo yepeyinti emhlophe kunye neziphatho ezintsha. Ngaphambi & Emva: IiNdawo zokukhanya zasebusuku ezikhanyisiweyo nezihlaziyiweyo zikaMichelle .
(Ityala lemifanekiso: Laura Montgomery)
2. Nyusa umahluko
U-Laura wajika i-nightstand evulekileyo yokuvuna ibe yimbonakalo entsha kunye nexesha langoku kunye nomsebenzi wepeyinti owahlukileyo ngomthi nomhlophe. Ngaphambi & Emva: Indawo yokuhlaziya ebusuku kaLaura .
(Ityala lemifanekiso: Uyilo, ukutya kunye neeNabile )
3. Yongeza iinkuni zokuthungwa
Esebenzisa iziqwenga zomthi kwi-trellis elahliweyo efumaneka egadini yakhe, uTaryn wongeze ubume kunye nesitayile kwitafile yakhe encinci esecaleni kwebhedi. Ngaphambi nasemva: I-Plain Jane Nightstand ifumana i-Wood Makeover .
(Ityala lemifanekiso: Ukubuyisa )
Ukuvuka nge-3 33 am intsingiselo
Zine. Yiba nesibindi ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Ngaba ujonge ukukhuthazeka ukongeza umdla kumdlalo weebusuku odiniweyo? Umbala wepende ohlaza okwesibhakabhaka awuzange ube ngumbono ombi! Phambi nasemva: Indawo yasebusuku yokuhlwa ebusuku ayisekho .
5. Fumana ijiyometri
Ayithathi itoni yepeyinti ukwenza umahluko omkhulu kwibala lokulala elidala, ngakumbi xa usongeza ipateni yejiyometri yanamhlanje ngenqindi kwitafile esecaleni kwebhedi. Ngaphambi & Emva: I-Nod ye-Nightstand kwiGeometry .
(Ityala lemifanekiso: URita Killilea )
6. Ipateni iyaxolela kakhulu
Ukuthetha ngephethini, ukongeza ipateni kunye nepeyinti malunga nayo nayiphi na ifanitshala esebenza ngomlingo omninzi, kwanakwiifenitshala ezindala ezingahambelani nesimbo sakho nangayiphi na indlela onokucinga ngayo. Ngaphambi nasemva: I-Nightstand yama-40 ubudala ubudala ifumana ukuKhangela okutsha koLutsha .
(Ityala lemifanekiso: Indlu entle nge Amakhaya kunye neeGadi ezingcono )
7. Ungajika malunga nayo nayiphi na into ibe yindawo esemgangathweni yasebusuku
Yiya kuthenga indlu yakho. Ngaba unefenitshala ongayithandiyo ekhethekileyo enokusebenzisa uhlengahlengiso kunye nekhaya elitsha? Esi siqwenga bubungqina bepeyinti obunokukholisa: Ngaphambi nasemva: Ivenkile yeTV yeVenkile ebabayo yaGuqulwa kwitafile esecaleni kwebhedi .
(Ityala lemifanekiso: Indawo yokuhlala eninzi )
8. Kwaye akukho mntu uthe awunakukwazi ukwenza ilokhwe ebusuku xa ufuna ukugcinwa
Vela nje ukuba kulungile ukuyinika unyango olukhethekileyo kwaye iya kuba ngcono ibhedi yakho ngaphandle kwexesha. Ngaphambi & Emva: I-IKEA Rast kwi-Nailhead Bedside Table .
(Ityala lemifanekiso: UDanielle Pearce )
9. Andiqinisekanga ukuba ndenzeni? Yongeza imitya kunye neziphatho ezintle
Nokuba imibala yepeyinti inesibindi okanye ayithathi cala kwaye izibambo zincinci okanye zihonjisiwe, ukongezwa kwezi zinto zimbini ngokuqinisekileyo kuya kuphefumla ubomi obutsha kwindawo yokulala ebusuku. Ngaphambi nasemva: UDanielle ufumana i-Nightstand entsha .
-Uhlengahlengiso olwenziwe kwisithuba esapapashwa okokuqala nge-8.24.14-AL
Imbali ekhawulezileyo: Usihlalo we-Acapulco
Ukuthengiswa kwemiSebenzi: Ukukhetha kwethu ezona zithembiso zibalaseleyo
Ngaphambi nasemva: I-odolo ye-IKEA ekwi-Intanethi isombulula ingxaki yoGcino lweziThuthi zakudala
I-888 ithetha inani leengelosi
umele ntoni 444
Ithetha ntoni u-7 11 ku-numerology
3 33 am ndibalulekile
amafu amile okweengelosi